Rochak – Page5– सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
मान्छेले विषालु सर्पसँग पप्पी लिने कोशिस गर्दा…
कुरा अमेरिकाको हो, जहाँ एक व्यक्ति सर्वसँग पप्पी लिने चक्करमा अस्पताल पुगेका छन् । सर्पसँग पप्पी लिने दुश्प्रयासमा उनको अनुहारमा सर्पले डसेको हो । फ्लोरिडाको पुटनम काउन्टीमा यो रेटलस्नेक भेटिएको थियो । रेटलस्नेक अमेरिकामा पाइन् निकै चलाख र विषालु सर्प हो । स्थानीय न्युज च्यानलको रिपोर्ट अनुसार रन रेनाल्ड नामका एक व्यक्ति सर्पसँग खेल्न सुरु […]
आफु मर्दै गरेर फोटो आफैले खिचेपछि
एजेन्सी । अमेरिकी सेनाले आफ्नो एक महिला फाटोग्राफरले लिएको तस्वीर सार्वजनिक गरेको छ । जसमा आफु र चार अफगानी सैनिक मर्दै गरेको समयको थियो । २२ वर्षीय ती महिला फोटोग्राफर हिल्टा क्लेटन र अरु चारजना अफगानी सैनिक २ जुलाई २०१३ मा भएको एक प्रशिक्षणमा बम विस्फोट भएर मरेका थिए । अमेरिकी सेनाले सो विस्फोटनमा एउटा […]
एक सेकेन्डमा ३०० शब्द लेख्ने रोबट पत्रकार अायाे, अन्य पत्रकारलाई चिन्ता
एक सेकेण्डमा ३०० शव्द लेख्ने रोबट पत्रकार फिल्डमा आए सँगै अक्षरको खेती गर्ने पत्रकारहरुको जागिर धरापमा पर्ने देखिएको छ । जिआओ नान नामक विश्वकै पहिलो रोबोट पत्रकारको आविष्कार कुनै चमत्कार भन्दा कम छैन । चीनले हालै एउटा यस्तो रोबोट पत्रकार तयार गरेको छ जोसँग लेखनको अद्भुत क्षमता छ । यो पहिलो रोबोट पत्रकारले लेखेको लेख […]
एजेन्सी । अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सीले सिरिया गएका एक अनुवादकले इस्लामिक स्टेट आईएसका चरमपन्थी लडाकुसँगै विवाह गरेको पुष्टि गरेको छ । यी अनुवादकलाई इस्लामिक स्टेटका लागि लडाकु भर्ना गर्ने विषयको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो । अमेरिकी न्युज च्यानल सीएनएनले ड्यानिएला ग्रीनले आफ्ना अधिकारीहरुसँग सन् २०१४ मा गरिएको सिरिया भ्रमणबारे झुठो बोलेको उल्लेख गरेको छ । […]
संसारकै वृद्ध व्यक्ति इन्डोनेशियाका १४६ वर्षीय घोटोको निधन
जकार्ता । संसारकै सबैभन्दा वृद्ध दाबी गरिएका १ सय ४६ वर्षीय बाह घोटोको इन्डोनेशियामा मृत्यु भएको छ । उनका दस्तावेजअनुसार सोदीमेजो नामले चिनिने बाह घोटोको जन्म सन् १८७० मा भएको थियो । तर इन्डोनेशियाले सन् १९०० पछि जन्मदर्ता सुरु गरेका कारण उनको जन्मदर्तामा सोही मिति उल्लेख छ । गत १२ अप्रिलमा स्वास्थ्यमा आएको खराबीका कारण […]
२५ वर्षदेखि घाँसपातको भरमा बाँचिरहेको यी व्यक्ति
संसारमा काहाली लाग्दो गरिबी छ मानिस गरिब भएकै कारण अनेक हर्कत गर्दछन् । कहिलेकाहीँ गरिबीका कारण मानिसमा यस्तो आदत बस्दोरहेछ जसलाई मानिस धनी भएपछि पनि छाड्न सक्दैन । पाकिस्तानमा एक जना व्यक्तिको यस्तै आदत छ । ५० वर्षका मेहमूद बट पछिल्लो २५ वर्षदेखि रुखका पात, घाँस तथा काठ खाएर बाँचिरहेका छन् । २५ वर्षअघि गरिबीको […]
बिएमडब्लु कार भन्दा बढी मूल्यको कुकुर
तपाई अनुमान अगाउनुहोस् कुकुरको मूल्य कतिसम्म पर्ला ? तपाइँहामीले अहिलेसम्म हजार तथा लाखसम्म पर्ने कुकुरका बारेमा सुनेका थियौँ । तर हाम्रो नै दुनियामा एउटा यस्तो कुकुर पनि छ जसको मूल्य बिएमडब्ल कारको भन्दा पनि बढ्ता छ । यो कुकुरको भाउ २५ देखि ५० करोड रुपैयाँ सम्म पर्दछ । यो मूल्यमा त एउटा बिएमडब्लु नै किन्न […]
सिरहा, ३१ चैत । माया, सद्भाव, सौन्दर्यको प्रतीक फूललाई मन नपराउने यो संसारमा को होला ? त्यसमा पनि वर्षको एक दिन मात्र फुल्ने त्यो फूल जसलाई श्रद्धा र भक्तिले हेर्ने गरिन्छ । त्यो फूल हेर्न कौतुहलताका साथ आउने आगन्तुकमा नेपालको मात्र नभई छिमेकी मूलुक भारतबाट आउनेको सङ्ख्या लाखौँमा रहेको छ । इसाको छैटौँ, सातौँ शताब्दीदेखि […]
Posted in: National News, Rochak
विश्वकै लामो बाइक
एजेन्सी । मोटरसाइकल भनेको कति नै लामो हुन्छ र, त्यही पनि दुई पांग्रे । विश्व बजारमा भएका अनेकौं ब्राण्डका कयौं मोटरसाइकलहरु त देखेकै छौं । तर हैरान बनाउने कुरा भारतको गुजराँतका एक बासिन्दा भरत सिंह परमारले विश्वकै लामो मोटरसाइकल बनाएर विश्वकिर्तिमान नै कायम गरेका छन् । तपाइँलाई थाहा पाउँदा नै हैरान लाग्नसक्छ की उनले बनाएको […]
संसारको सबैभन्दा होची आमा, जन्माइन तीन बच्चा
एजेन्सी । सुन्दा अचम्म लाग्छ उनको उचाई मात्र २ फिट ४ इन्च छ । अमेरिकाको केन्टकीमा बस्ने स्टेसी हेराल्डले सन् २००० मा बिहे गरिन, ५ फिट ९ इन्च अग्ला पुरुषसंग । हेराल्ड दुनियाकी सबैभन्दा होची आमा हुन् र उनका अहिलेसम्म ३ वटा बच्चा भैसकेका छन् । उनी ओस्टोगेनिसिस इम्पर्फेक्टा नामक रोगबाट पीडित छिन् । यसकारण […]